IINGCAMANGO EZI-7 EZILULA ZOSHISHINO KUBAFAZI-PAMPEREDPEOPLENY.COM - I-INSYNC
Iingcamango ezi-7 ezilula zoShishino kubafazi
Ekhaya I-Insync Cinezela Pulse oi-Abasebenzi Ngu Bhadra Kamalasanan | Ipapashwe: NgeCawa, nge-Epreli 20, 2014, 1:00 [IST]
Abasetyhini kwihlabathi langoku bahluke kakhulu kwinto ababefudula beyiyo. Namhlanje, abasetyhini bakumacandelo onke omsebenzi kwaye benza umahluko xa kufikwa kwilizwe leshishini. Nazi iindlela ezisixhenxe zeshishini ezinokusebenza kakhulu kubafazi, kuba imali yeyona nto ibalulekileyo kuwo wonke umntu.
Uyinika njani i-spa yeenwele ekhaya
Imali yile nto wonke umntu ayifunayo, abanye bayifuna kakhulu ngelixa abanye banelisekile sisabelo sabo. Nokuba yeyiphi imeko yakho, nazi izimvo zeshishini labasetyhini abanokwenza umahluko ngokwenza ishishini ngokwabo. Ukuba ucinga ukuba ikude kakhulu, cinga kwakhona. Ngaphandle kokuba ngumama, udade, umfazi kunye nentombi, umntu obhinqileyo ikwangumntu okwaziyo ukutshintsha izinto kwaye azenze zilungele imeko yakhe. Izimvo zeshishini labafazi aziyonyani kwakhona apha kufuneka sizenze zibe yinyani kuwe.
I-6 GENIUS WAYS INDIAN MOMS ZONGA IMALI
Abasetyhini bayile ngendalo kwaye kungoko ke babonwa njengabanempembelelo enkulu kwindawo ekwi-intanethi. Abasetyhini banokuba ngababhali abazimeleyo okanye banokuba ngumlamli phakathi kwababhali abazisebenzelayo nabaxhasi. Banokubhala kakuhle ngokwendalo kwaye ke, banokuba ngamaqabane amashishini amakhulu kwindawo ekwi-Intanethi.
ukunciphisa ubungakanani besifuba sakho ngeveki
Abasetyhini banezakhono ezintle zokuphatha. Le talente inye inokusetyenziswa ngabo ukuba babe ngabancedisi bokwenyani. Umncedisi obonakalayo ngumntu oncedisayo rhoqo kwaye usebenza njengokumisela ixesha lokuchongwa, ukuchwetheza nokwenza olunye uxanduva lolawulo. Iindaba ezimnandi zezokuba konke oku kunokwenziwa ngokuhlala ekhaya.
ioyile yomthi weti efumaneka kwiivenkile zonyango
Ifashoni kunye nesitayile yenye yezinto eziza ngokwendalo kubafazi kwaye le yimvelo yabo. Ke ngoko, abasetyhini banokuba ngabaqulunqi befashoni abakwi-Intanethi okanye abacebisi. Oku kunokuba mnandi njengoko unokuba ubeke isinxibo kwamanye amanenekazi. Kuya kufuneka uthathe iinkcukacha zesitayile sokuqonda kunye nohlobo lomthengi kwaye ubacebise ukuba yintoni enokubonakala intle kubo.
Nantsi enye indlela apho abafazi banokuba ngabafazi abasebenza kakuhle. Ukufundiswa kwi-Intanethi kulunge kakhulu kubafazi kwaye banokunceda abafundi ukuba bafunde izifundo ezahlukeneyo, nokuba ngowuphi na umxholo onokukhululeka kuwo. Njengomhlohli we-Intanethi, uya kwabelana ngeefayile, usebenzisa izixhobo ezisebenzayo kunye nokuphendula imibuzo yabafundi.
Olunye uluvo lweshishini olusemagqabini kwabasetyhini kukusebenzisa izakhono zabo zokupheka kunye nokwenza ukuba lusebenze. Abafazi bangaqala ukuphaka ukutya neziselo ekhayeni labantu, kwabo bakufunayo. Uninzi lwabantu lukufumanisa kunzima ukupheka emva kosuku lwabo olunzima, kwaye ungaluncedo olukhulu apha.
uyifumana njani imilebe epinki yendalo
Ihlabathi lokulawula imisitho ubukhulu becala lixhomekeke kubafazi kuba banezakhono ezintle zolawulo. Ukuba unesakhono sokuhambisa izinto ngokukhawuleza kunye nokwenza inethiwekhi ebanzi, ke ukulawula iminyhadala yindebe yakho yeti.
Iinkampani ziqesha abacebisi abathengisayo abazimeleyo kwaye unokuba luncedo apha ngokuthengisa iimveliso okanye iinkonzo ngokwenza iifowuni okanye ukunxibelelana kwi-Intanethi. Ezi nkampani ziya kukubonelela ngedatha eya kukunceda uthengise iimveliso.
Izimvo zeshishini kubafazi zininzi, jonga nje kwindawo elungileyo kwaye ubambe ithuba.
Isonka esimdaka ngesonka sokunciphisa umzimba
uyisebenzisa njani iviniga yeapile cider ebusweni
Uyisebenzisa kanjani ioyile ye-castor xa kuwa iinwele
xa umfazi eyithanda ngokwenene indoda
i-multani mitti ilungile kulusu
ezona nwele zilungisiweyo iinwele ezibhityileyo
bangaphi abantu abanonobumba m entendeni